Xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Sevilla oo la shaaciyey… (Ronaldo iyo xiddigo muhiim ah oo ka maqan) – Gool FM
Xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Sevilla oo la shaaciyey… (Ronaldo iyo xiddigo muhiim ah oo ka maqan)
Haaruun January 11, 2017
(Madrid) 11 Janaayo 2017 – Luka Modric iyo James Rodriguez ayaa sidoo kale seegaya kulanka lugta labaad ee wareegga 16-ka Copa del Rey.
Tababare Zinedine Zidane ayaa qiray in uu nasiino siiyey Cristiano Ronaldo iyo Luka Modric kulanka Real Madrid ay wajahayso naadiga Sevilla ee Copa del Rey.
Ronaldo ayaa sidoo kale seegay kulankii lugta hore ee wareegga 16-ka kaasoo ay Real Madrid ku adkaatay 3-0 ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu, kulanka lugta labaad ayuuna xiddigan weerarka ka dheela seegi doonaa.
Waxa uu ku soo laabtay shaxda safka hore kulankii ay 5-0 uga badiyeen Granada, laakiin waxaa loo ogolaaday Ronaldo inuu markale ka maqnaado Real Madrid kulanka habeen dambe.
Dhinaca kale Modric ayaa ciyaaray 90’daqiiqo labadii kulan ee ugu horreeyey Real Madrid sanadkan 2017, laakiin Zidane ayaan u baahnayn adeegga laacibka xulka qaranka Croatia, kulanka ka dhacaya garoonka Ramon Sanchez Pizjuan.
Sidoo kale kooxda ka dhisan caasimadda ayaan heli doonin laacibka James Rodriguez, waxaana xiddigii hore ee Monaco uu shabaqa soo taabtay labo jeer lugtii hore, laakiin dhaawac ayaa seejin doona kulankan lugta labaad.
Isco ayaa sidoo kale seegi doono kulanka kooxdiisa Madrid ay u safreyso Sevilla sababo dhaawac, halka Pepe iyo Gareth Bale aysan awoodin inay soo laabtaan.
Sergio Ramos, Lucas Vazquez iyo Mateo Kovacic ayaa dhammaantood soo laabtay.
Halkaan hoose ka eeg shaxda 19-ka xiddig ee Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Sevilla:-
Luka Modric oo markii 5' loo magacaabay Xidigga sanadka ee Waddanka Croatia
Ronaldo oo noqday xidigga ugu Labiska qurxoon kolka abaalmarinnada la bixinayo